मनकामना माताले सबैको कल्याण गरुन ! बि.स. २०७४ साल पौष २५ गते मंगलबार इश्वी सन २०१८ जनवरी ९ तारीख माघकृष्ण पक्ष, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल « Light Nepal
मनकामना माताले सबैको कल्याण गरुन ! बि.स. २०७४ साल पौष २५ गते मंगलबार इश्वी सन २०१८ जनवरी ९ तारीख माघकृष्ण पक्ष, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Published On :9January, 2018 12:20 am
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल पौष २५ गते मंगलबार इश्वी सन २०१८ जनवरी ९ तारीख माघकृष्ण पक्ष अष्टमी तिथी चन्द्रमा कन्या राशिमा सुर्य दक्षीणायन हेमन्त ऋतु भौमाष्टमी व्रत, गोरखकालि पूजा – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे / लाइटनेपाल डटकम
तपाईका कार्यमा भएको त्रुटिको प्रतिपक्षीहरुले फाईदा लिन सक्नेछन । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा समय उत्तम देखिएको छैन । शारीरिक आलस्यताले सताउन सक्नेछ । बिश्वासीला ब्यक्तिहरु बाट धोका हुन सक्नेछ ।
सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । सामान्य यात्रा हुन सक्छ । चाढो क्रोधको सिकार भईनेछ सजग रहनु होला । पारीवारिक समस्याले सताउन सक्छ । सामान्य चुनौति पस्चात आम्दानि राम्रो रहनेछ ।
पारिवारिक मेल मिलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । बिद्या प्राप्ति योग रहने छ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ ।
नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । दिन मध्यम रहनेछ ।
सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । नयाँ लगानिको क्षेत्रमा समय राम्रो छैन सजग रहनु होला ।
नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । साझेदारी कार्यको क्षेत्रमा अघि नबढेको नै राम्रो हुनेछ ।
खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । शत्रु बृद्धि हुनसक्छन् । जिबन साथीको सहयोग द्वारा गरीएका काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । नेत्र सम्बन्धि समस्याले सामान्य खर्च हुनसक्ने योग रहेको छ । एकान्त वाताबरणमा मन रम्नेछ ।
नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । पारीवरिक शुःख प््राप्त हुनेछ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यमा बिषेश सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ । समय राम्रो रहेको छ ।
भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला ।
साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । पेट सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
मनोरञ्जन मूलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । भोज भतेरमा सरीक हुने समय रहेको छ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ ।
मनोरञ्जन मूलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । सञ्चित रकम खर्च हुने योग रहेको छ । बाणिको कारण दाम्पत्य सुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ ।